Musharax lagu dilay qarax ka dhacay Afghanistan
By VOA , Afghanistan
Jabar Qahraman oo lagu dilay qarax loo geliyay kursigiisa xilli xafiiskiisa kula kulmayay taageeriyaal
KABUL - Musharax u taagnaa doorashooyinka baarlamanka dalka Afghanistan ayaa maanta lagu dilay weerar bombaano oo lagu qaaday xafiiskiisa, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Helmand.
Omar Zawak, afhayeenka barasaabka gobolka Helmand, ayaa sheegay in Jabbar Qahraman lagu dilay qarax lala beegsaday xafiiskiisa magaalada Lashkargah, kaasi oo sidoo kale dhowr qof oo kale lagu dhaawacay.
Dhinaca kale, dhaqatar ku sugan qeybta xaaladda deg degga ah ee Isbitabka Helmand ayaa sheegay in laba qof ay dhinteen lix kalena ay dhaawacmeen
Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in Qahraman walxaha qarxa loo dhex-geliyey kursigiisa. Si kastaba, goobjoogeyaal ayaa VOA u sheegay in qof soo xirtay jaakad qaraxda oo iska soo dhigay taageerihiisa uu isku qarxiyey Qahraman.
Abdul Salam Afghan, afhayeenka gobolka Helmand, ayaa sheegay in koox baarayaal ah ay goobta tageen si ay u baaraan.
Kooxda Taliban ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa. Kooxdan ayaa horaantii bishan ku dhawaaqday inay carqaladeyn doonto doorashooyinka Afghanistan, waxayna taageerayaasha ugu baaqday inay weeraro la beegsadaan dadka ka qeb qaadanaya.
Daacish oo Qarax ka fulisay Afghanistan xilli xabad-joojin lala galay Taliban
Caalamka 16.06.2018. 23:39
Maamulka Trump ayaa shaaciyay inuu dusha kala socdo Heshiiska dowladda iyo Taliban...
Dad badan oo lagu laayey Weeraro ka dhacay Afghanistan
Caalamka 22.05.2018. 22:56
Qaraxyo ka dhacay Kabul oo lagu dilay ku dhawaad 10 Wariye
Caalamka 30.04.2018. 17:51
Taliban oo kasoo jawaabtey xabad-joojintii loogu baaqay
Caalamka 09.06.2018. 12:16
Ashraf Ghani oo ku dhawaaqay Xabbad-joojin lala sameynayo Taliban
Caalamka 07.06.2018. 15:15
Weerar Askar badan lagu dilay oo ka dhacay Afghanistan
Caalamka 14.08.2018. 13:46
Qarax ka dhacay Bangi ku yaalla Kabul
Caalamka 29.08.2017. 13:36